ECONOMIEGAZETIN' NY NOSY
Inty sy Nday: Sao tokony hianarana ?...	Vendredi, 17 Mai 2013 08:46	Nisesisesy, tato ho ato, tao amin’ireo fahitalavitra tsy miankina ny horonan-tsary fanadihadiana mahakasika an’i Dubaï. Nahavariana no sady nampitsiriritra ny sary nivoaka sy ny fanazavana nanaraka azy. Lire la suite...
Fifidianana filohampirenena: Hatao aorian’ny fifidianana depiote?	Vendredi, 17 Mai 2013 08:45	Niteraka ady hevitra sy fifandroritana teto amin’ny tany sy ny firenena ny fampiharana ny andininy faha-14 ao amin’ilay lalàna manome hery ara-panjakana ilay Tondrozotra,
Anosibe: Mpangarom-paosy noraisim-potsiny	Vendredi, 17 Mai 2013 08:44	Lehilahy miisa roa izay tsy zoviana amin’ny mpivarotra sy ny mponina eny an-toerana amin’ny fanendahana sy fanaovana harom-paosy no voasambotry ny mpitandro ny filaminana eo anivon’ny kaomisarian’ny boriborin-tany fahadimy ny alarobia lasa teo.
Tetik’asa lalan-kely: Vita hatramin’ny 50%	Vendredi, 17 Mai 2013 08:43	Ny faha-22 novambra 2012 no nanombohan’ny tetik’asa Lalankely izay eo ambany fiahian’ny lefitry ny primatiora misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany.
Pastora Andriamanjato Richard: Nodimandry teo amin’ny faha-83 taonany	Vendredi, 17 Mai 2013 08:42	Very olo-manga iray indray i Madagasikara satria omaly hariva dia re fa nodimandry tany Parisy, renivohitr’i Frantsa teo amin’ny faha-83 taonany ny pastora Andriamanjato Richard. Lire la suite...
Fitifirana sinoa teny Andoharanofotsy: Tafakatra 11 no olona efa voasambotra
Minisitra Olga Ramaroson: “Ambony noho ny tondrozotra sy ny lalàna ny fitiavana”
Inty sy Nday: Diso tokoa ve ?...
CST: Tsy matotra intsony ny fomba fiasa
<< Début < Préc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant > Fin >>	Page 2 de 13	ECONOMIE